Janan “Go’aanka lagula dirirayo Jubbaland ee ay ka go’do waa Taliyaha NISA” – Radio Damal
Janan “Go’aanka lagula dirirayo Jubbaland ee ay ka go’do waa Taliyaha NISA”
Wasiirkii Amniga Jubbaland C/rashiid Xasan Cabdinuur oo baxsad ka ah dowladda Federaalka, kaddib markii bilo ka hor ka baxsaday xabsi ay dowladda ku heysan oo ku yaalla Muqdisho ayaa ka sheekeeyay marxaladihii khilaafka dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland iyo qaabkii lagu xiray.
C/rashiid Janan ayaa sheegay in mar kasta Axmed Madoobe uu diyaar u ahaa wada hadal, balse dhanka dowladda Federaalka ay waday isku day kasta oo dagaal ka dhan ah, si ay ula wareegto Maamulka Jubbaland.
Wareysi uu siiyay Warbaahinta Online-ka ee Hanoolaato ayuu ku sheegay in dhowr jeer uu Muqdisho u tagay wada hadal, balse dowladda ay mar kasta diidaneyd oo dagaal ay u cadeyd.
“Waxaa jirtay mar aan Madaxweynaha ku iri maxaa sameyn doontaa haddii Axmed Madoobe dib loo doorto, wuxuu i yiri waa la shaqeyneynaa, isla su’aashaas waxaa weydiiyay Taliyihii Nabadsugida Fahad Yaasiin wuxuu i yiri maalinta la doorto ayaa la dagaalameynaa, runtii hadalka Taliyaha Nabadsugida ayaa ahaa kii saxda ahaa”ayuu yiri Janan oo intaa ku daray in mar walba dowladda ay ka dooneysay inuu dagaal ku qaado Axmed Madoobe.
Mar uu ka hadlayay xarigiisa iyo cida ku lugta laheyd ayuu sheegay in xariggiisa Muqdisho ay ka dambeeyeen Madaxweyne Farmaajo, Taliyaha Nabadsugida Fahad Yaasiin iyo C/llaahi Kulane oo Madaxweynaha qaraabo la ah, kana mid ah saraakiisha sare ee Nabadsugida.
“Markii la doortay Axmed Madoobe waxaa aaday Gedo, gaar ahaan Doolow, waxaa rabay inaan u gudbo Addis Ababa, saraakiisha itoobiyaanka waxay iga codsadeen in aysan jirin diyaarad Doolow iyo Addis Ababa, oo ay isoo diraan gaari, waxaa ku iri Muqdisho ayaa tagayaa, si aan diyaaraddiina oo timaado u soo raaco, Muqdisho ayaa tagay oo aan Transit ku ahaa, markii aan soo baxay waxaa iga warqabay oo aan u sheegay C/raxmaan Dheere, marka Muqdisho tagay niman dharcad ah ayaa iga kaxeeyay oo gaari igu qaaday, ina xiray”ayuu yiri C/rashiid Janan oo intaa ku daray in markii la xiray oo guri la geeyay uu u yimid Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, kuna wargeliyay in ciidanka Gedo joogo inuu soo wareejiyo, sidaasna ay ka soo dalbadeen Madaxda.
Waxaa uu sheegay in ninka ay talada ka go’day ee colaada Jubbaland waday oo go’aanka lagula dirarayay lahaa uu ahaa Taliyaha Nabadsugida Fahad Yaasiin.
Khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa weli halkiisa ah, waxaana la hadal hayaa in dowladdu qorsheyneyso inay soo saarto go’aan ka dhan ah Maamulka Jubbaland.